Vondrona korira kanton’ny haisoratra: haseho masoandro ny “Tontolo poetika” | NewsMada
Vondrona korira kanton’ny haisoratra: haseho masoandro ny “Tontolo poetika”
Sehatra iray anisan’ny hivelaran’ny mpanoratra sy ny asa soratra ny Vondrona korira kanton’ny haisoratra. Manatanteraka hetsika tsy tapaka izy ireo ho fampahafantarana ny zava-baovao…
Velona ny literatiora… Misandratra ny teny! Miroborobo ny haisoratra endriky ny firenena, manabe voho ny boky malagasy. Hivoaka etsy amin’ny Cemdlac Analakely, ny asabotsy 30 novambra 2019 amin’ny 2 ora sy sasany, ilay boky “Tontolo poetika” iarahana amin’ireo poeta efatra mirahalahy: i Bade RaAnRama, Ny Rovako, i Ando-Harinjaka, i R-Degra, avy ao amin’ny Vondrona korira kanton’ny haisoratra.
Nanao ny sasin-teny Ranoe, nanao ny teny fanolorana i Lila Ratsifandrihamanana, nanoratra ny teny famaranana i Saholy Rakotonanahary. Araka ireo mpanoratra nanolo-tena namela ny dian-tanany ao amin’ity boky ity, azo ambara fa ho boky hanana ny lanjany sy hahatety vanim-potoana maro izy fa tsy boky tefy maika velively akory.
Mifanindran-dalana amin’io famoahana ny boky “Tontolo poetika” io ny antsan-tononkalo entina hanomezana aina sy fahafaham-po sahady ireo mpitia literatiora. Ireo rehetra ireo, ravahin’ny hira iangalian’ny mpanakanto tsy ampoizina. « Araka ny tononkalon’i Ny Rovako izay nakana ity lohateny ity, toy ny hoe misy tontolo poetika azo trandrahina avokoa ny sehatra rehetra, ny tranga maro samihafa… Ny lohahevitra rehetra ihany koa, azo tantaraina sy lazaina amin’ny fomba poetika daholo », hoy i Ando-Harinjaka, raha nanazava fohifohy ny hevitry ny hoe: “Tontolo poetika” izy.